Mhepo Ratidziro 3, inowanikwa nechakakosha kuderedzwa paApp Store | IPhone nhau
Pane dzakawanda nguva, zvirokwazvo inopfuura imwe yakave nekudiwa kwekuve neyechipiri yekutarisa kuti ikwanise kuita rimwe basa. Zvine musoro kana zvisiri izvo zvinodikanwa zuva nezuva, kutenga yekutarisa chete yezviitiko izvi hakuna musoro. Asi kana isu tiine iyo iPad, nekuda kweMhepo Ratidza 3 application, tinogona kuishandisa sekunze yekutarisa yeMac yedu, kuti tikwanise sangana nezvatinoda panguva ipi neipi nekushandisa kumwe chete. Asi zvinobatsirawo kana tikapedza zuva kubva pano kuenda apo ne laptop uye pane imwe nguva isu tine chikonzero chekuita kuti skrini yeMac yedu ive hombe.
Air Ratidza 3, inotibvumidza kushandisa yedu iOS chishandiso seyekuwedzera skrini yeMac yedu, kungave kuburikidza neiyo isina waya yekubatanidza kana kushandisa USB tambo. Parizvino chishandiso ichi chinowirirana neMac chete, asi vhezheni yapfuura inoenderana neWindows. Mhepo Kuratidzira 3 ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye14,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuiwana chete ma4,99 euros chipo chekuti dai waive wakachimirira iwe haugone kuramba.
1 Mhepo Ratidza 3 maficha makuru
2 Kuratidzwa Kwemhepo 3 zvinodiwa
Mhepo Ratidza 3 maficha makuru
USB yekubatanidza: Kune kunyange nekukurumidza uye nekuvimbika kuita, unogona kubatanidza yako iOS chishandiso uye Mac yako kuburikidza ne USB tambo.
Pinch Zoom: Zoom in kuti uwedzere chidzitiro. Izvi zvinonyanya kubatsira kana uchidhonza kana kupenda ruzivo.
Multiple Monitors: Mhepo Ratidziro inosangana inosvika ku4 iPads panguva imwe chete kune masimba mazhinji-ekumisikidza setups.
HiDPI: Sarudza kubva pane zvakajairwa, Retina kana HiDPI resolution kuti ikwane kuravira kwako.
Yekhibhodi: Nyora uchishandisa iyo Air Ratidza yakavakirwa-mukati keyboard kana chero Bluetooth keyboard.
Kuratidzwa Kwemhepo 3 zvinodiwa
Desktop: Mac OS X 10.8 (Mountain Shumba) kana kumusoro
Mahwindo: haatsigirwe parizvino, asi ramba wakatarisana! Vashandisi veWindows vanofanirwa kusarudza Air Ratidza 2
Kuti ushandise tekinoroji yeWi-Fi, zvishandiso zveMac uye iOS zvinofanirwa kunge zviri pane imwecheteyo netiweki yeWi-Fi.
Nekuda kweyechitatu-bato raibhurari madhigi, kumanikidzwa kwekunzwa kwakamiswa kwenguva pfupi muIOS 9.
Kuratidzwa Kwemhepo16,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mhepo Ratidziro 3, inowanikwa nechakakosha dhisikaundi paApp Store
This is zum zum…
Tim Cook anopokana nekugadzira rejista yeMuslim yeTrump